News - Self-sealing refuel gun သည် self-sealing မဖြစ်နိုင်ပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း။
အကယ်၍ Self-sealing refueling gun သည်မိမိကိုယ်ကိုတံဆိပ်ခတ်။ မရပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း။
လောင်စာဆီထရပ်ကားရှိလောင်စာသေနတ်သည်မိမိကိုယ်ကိုတံဆိပ်ခတ်နိုင်ခြင်းရှိ / မရှိဆိုသည်အဓိကအားဖြင့်လေဟာနယ်အခန်းသည်လုံလောက်သောလေဟာနယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆီဖြည့်သည့်သေနတ်သည်မိမိကိုယ်ကိုတံဆိပ်ခတ်။ မရပါကအောက်ဖော်ပြပါအတွေးအခေါ်များအရဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။
1. စည်နှင့်သေနတ်ကိုယ်ထည်အကြားအဆစ်မှာတံဆိပျကိုယုံကြည်စိတ်ချရရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ အဆစ်မှာအို - လက်စွပ်ပျက်စီးသည်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ၎င်းသည်ပျက်စီးပါကအစားထိုးပြီးနောက်အစားထိုးနိုင်သည်။
၂။ Barrel cone အဆို့ရှင်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအရာဝတ္ထုများတွင်အရာဝတ္ထုများရှိပါကစည်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးဖုန်ကိုဖယ်ရှားပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။
3. ယိုစိမ့်မှုအတွက်လေဟာနယ်အခန်းကိုစစ်ဆေးပါ။ လေဟာနယ်အဖုံးတွင်လေဟာနယ်မြှေးများကျိုးသွားသည်သို့မဟုတ်သော့ခတ်ထားသောဝက်အူနေရာတွင်မရှိတော့လျှင်လေဟာနယ်ကို ဖွဲ့စည်း၍ မိမိကိုယ်ကိုတံဆိပ်ခတ်။ မရပါ။
၄။ သေးငယ်သောစီးဆင်းမှုနှုန်းသည်မိမိကိုယ်ကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အသေးစားစီးဆင်းမှုနှုန်းတွင်အရည်စီးဆင်းမှုနှုန်းနိမ့်သည်၊ အရည်စီးဆင်းမှုစုတ်ယူခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အားနည်းသည်၊ လေဟာနယ်အခန်းသည်လုံလောက်သောလေဟာနယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ လောင်စာသေနတ် Self- တံဆိပ်ခတ်စေရန်နွေ ဦး ကိုကျော်လွှားမရနိုင်ပါ။
၅ အကယ်၍ သင်သည်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းလောင်စာသုံးသေနတ်၏အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်နားလည်မှုကိုသင်နားလည်ပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ၊ ကျေနပ်လောက်သောအဖြေကိုပေးပါမည်။